Sawirro: Soomaaliya dimuquraadiya Afrika 1967-2017 - Ceelhuur Online
Home > Uncategorized > Sawirro: Soomaaliya dimuquraadiya Afrika 1967-2017
Sawirro: Soomaaliya dimuquraadiya Afrika 1967-2017
February 11, 2017 admin230
June 10, 1967 Madaxwayne Aadan Cabdulle Cusmaan Allah ha u maxariiste wuxuu xilka ku wareejiyay walaalkiis Cabdirashiid Cali Sharma’arke kadib markuu kaga guulaystay doorashada, waxay ahayd Taariikh wayn oo dhanka demqoraadiyadda Afrika.
10 October 2004 Madaxwaynahii dowladda ku meel gaarka ahayd Mudane Cabdiqaasim Salaad Xassan wuxuu xilka ku wareejiyay Col. Cabdullaahi Yuusuf Axmad oo markaas baarlamaankii dowladda Federaalka ku meel gaarka ahayd u doortay Madaxwayne.
12 October 2004 Cabdullaahi Yuusuf wuxuu booqday Cabdiqaasim Salaad isagoo ka codsaday inuu dowladdiisa tallooyin siiyo.
16 September 2012 Madaxwaynahii DFKG ahayd ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmad wuxuu xilka ku wareejiyay Madaxwayne Xassan Shiikh Maxamuud kaddib markuu kaga guulaystay doorasho demqoraadi ah midii ugu horreeysay ee Muqdisho ka dhacday tan iyo 1967; 10 bishii September 2012.
Waxaan sugna waa xil wareejinta Madaxwayne Xassan Shiikh Maxamuud u ku wareejiyo madaxtinnimada walaalkiis Maxamad Cabdullaahi Farmaajo oo kaga guulaystay doorashadii Baarlamaanka ee ka dhacday markii labaad magaalada Muqdisho 8 bishan February.
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Madaxda Maamul goboleedyada
Sawirro: Ururka Dhalinyarada Godinlabe oo deeq gaarsiiyey 150 Qoys